openSUSE 13.2 misy + torolàlana fametrahana aorian'ny fametrahana | Avy amin'ny Linux
Fotoana vitsy lasa izay ny ekipa openSUSE dia namoaka ny kinova farany farany an'ny openSUSE 13.2.
1 OpenSUSE 13.2 Endri-javatra:
2 Aiza no ampidiniko?
3 Inona no hatao aorian'ny fametrahana?
OpenSUSE 13.2 Endri-javatra:
openSUSE 13.2 dia ...
Ezaka be no napetraka tamin'ny fanandramana tamin'ity lahatsoratra ity, miaraka amin'ny fanatsarana ny fitaovana fanandramana mandeha ho azy openQA, fitaovana iray hiantohana fa tsy misy zavatra tsy ampoizina tsy ampoizina ny vokatra farany.
Ny rafi-drakitra Btrfs dia ny rafitra fisie default ho an'ny fisarahana faka, ary XFS ho an'ny fizarazaran-trano / an-trano. Ny kernel Linux 3.16 dia mitondra fanatsarana ihany koa amin'ny fitoniana sy ny fanekena ireo fitaovana samihafa. Ho fanampin'izany, ny kaody loharanom-pahalalana YaST dia efa matotra taorian'ny nandefasana azy tany Ruby, fiteny iray mamela ny fivoaran'ny endrika sy fitaovana vaovao.
Ity famotsorana ity dia miaraka amin'ny AppArmor 2.9 izay alefa amin'ny alàlan'ny toerana misy anao izay midika ho fiarovana bebe kokoa sy profil mivaingana ao amin'ny AppArmor. Betsaka koa ireo fonosana nohavaozina hafa ho an'ny fitaovana tambajotra maro hafa toa ny Samba, AutoYaST, sy ny maro hafa.
openSUSE 13.2 dia miaraka amin'ny GCC 4.8 sy ny safidy hametraka ny GCC 4.9 vaovao, Qt 5.3 izay mitondra fanatsarana maro ho an'ny interface QT. Azonao atao ihany koa ny misafidy ny hametraka ny KDE5 vaovao (izay mbola eo an-dàlam-pamolavolana).
Amin'ity famoahana ity, ny YaST "nadika" ho amin'ny fiteny Ruby dia efa matotra ka ny codebase-ny izao dia azo antoka kokoa ary feno endrika vaovao tsara kokoa noho ny nantenain'i Yast. ActiveDoc dia manohy ny toerana hahitana antontan-taratasy ho an'ny fitaovana isan-karazany izay ho hitanao na ho ela na ho haingana eo amin'ny tontolon'ny Linux. Ny Version 13.2 dia manolotra ihany koa ny KDE 4.14 izay ho tontolon'ny birao raha toa kosa ny tetikasa KDE dia manohy mamolavola izay ho Plasma 5. Mandritra ny GNOME dia afaka mankafy ny kinova 3.14 ianao. LXDE dia nohavaozina tamin'ity famotsorana ity niaraka tamin'ny fonosana nohavaozina, fanatsarana ny fahitana, ary fanamboarana bibikely an-taonina.
Ny KDE dia tonga miaraka amin'ny fanampiana amin'ny fampifangaroana ireo fitaovanao finday amin'ny alàlan'ny fonosana kdeconnect. Ny rafi-drakitra Btrfs vaovao izay napetrakao ho an'ny fisarahana faka, dia midika fa hisy fampiasa vaovao be dia be, mihoatra ny noeritreretinao natao. YaST koa dia miaraka amin'ny interface Qt vaovao izay novaina ihany koa amin'ny Qt5.
Sary vitsivitsy an'ny openSUSE miaraka amin'i Gnome:
Aiza no ampidiniko?
Ampidino ny oprnSUSE
Inona no hatao aorian'ny fametrahana?
su (ampahafantarinay ny teny miafin'ny superuser) zypper up zypper install-new-fahazoan-dàlana
zypper ar -f -n packman-essents http://packman.inode.at/suse/openSUSE_13.2/Essentials/ packman-essents zypper ar -f -n packman-multimedia http://packman.inode.at/suse /openSUSE_13.2/Multimedia/ packman-multimedia
Manavao ny rafitra izahay:
zypper mametraka vlc vlc-codecs fetchmsttfonts rar unrar htop nano mc filezilla MozillaThunderbird zypper up zypper install-vaovao-manoro hevitra
Ary voila… Vonona ny openSUSE 13.2 ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » openSUSE 13.2 misy + torolàlana fametrahana aorian'ny fametrahana !!!
Misaotra betsaka, fa misy mahalala fanitarana manafina ny sarin'ny rindranasa ampiasainay, ilay hita eo amin'ny bara ambony, satria tsy tiako izany, avy amin'ny fibodoana os luna fanabeazana fototra aho ary voatery nanova ny rafitra fandidiana, noho ny fiovan'ny solosaina ary ny vaovao dia tsy mamela ahy hametraka os fototra ka miaraka amin'ny ubuntu gnome 14.04.1 aho
Manampy anao ity:
Toa sahirana mivarotra Suse misokatra hahaha izy ireo nefa ekeko fa distro tena tsara izy io
Tsy amidiko io .. distro be fotsiny :).
Tato ho ato dia tena tsara ny OpenSuse, saingy tsy afaka miala amin'i Debian aho, mazàna satria ny distro hafa misy systemd dia mivaingana tampoka mandritra ny fanombohana (tsy haiko ny antony tsy hitrangan'i Debian). Ary ny marina dia miasa mahatalanjona ho ahy i Debían Testing. Mampiasa FreeBSD sy Slackware ihany koa aho, saingy miaraka amin'ity farany ity dia mandany ny androko hamerenako indray ireo zavatra nanjavona taorian'ny fanavaozana.
Mpampiasa Debian aho ary nankany amin'ny maro hafa hanandramako anisan'izany ny FreeBSD sy Slackware ary amin'ny farany dia eto amin'ny tontolon'ny SUSE aho. FreeBSD 10 dia tsara fa ho an'ny mpizara ihany .. Ao amin'ny birao dia tsy mahazo aina izy.
Mampiasa FreeBSD ho birao iray hafa aho fa tsy isan'andro, ary tena mety amiko izany. Tsy mahita afa-tsy GParted aho, mametaka mora kokoa ireo fizarazarana na kapila ivelany ao amin'ny Ext4 ary fanohanana tsara kokoa ho an'ny Wacom (izay tsy azoko atao ny miasa na voatifitra ny stylus). Tsara daholo ny zavatra hafa rehetra. Raha tsy nanana ireo lesoka telo ireo aho dia mbola handao ny Linux mandritra ny fotoana iray.
Miaraka amin'ny OpenSuse dia nandany fotoana kelikely aho, toy ny amin'ny maro hafa, mandra-pahaoko fa tsy maintsy mamerina imbetsaka imbetsaka aho hanandrana mankany amin'ny efijery fidirana.
Izany no antony iantsoako ny FreeBSD tsy mahazo aina eo amin'ny birao :). Ary misy zavatra maro kokoa… Amin'ny openSUSE dia tsy nisy zavatra hafahafa nitranga tamiko nanomboka tamin'ny 12.3. Tsy mbola nahita ny olana nolazainao aho hoe tsy maintsy mamerina hanangana ny efijery fidirana.
Misy olona mitovy zavatra mahazo ahy ve? mampifandray.
Salama Carlos, azonao atao ny manandrana mametraka ireto fonosana ireto:
zypper amin'ny kernel-firmware
Raha azo entina:
zypper amin'ny lamina-openSUSE-laptop
Raha tsy nisy nanampy tamin'ny fametrahana ny kernel default. Raha te hahita izay kernel ampiasainao dia mihazakazaka uname -a. Raha hitanao fa voalaza amin'ny anarana «birao» apetraka ity:
zypper amin'ny kernel-default
Raha tsy nisy nanampy anao dia afaka manandrana ny kernel vanilla (mivantana avy amin'ny kernel.org tsy misy fanovana amin'ny openSUSE):
zypper amin'ny kernel-vanilla
Tsy haiko raha izany no tranga misy anao, fa ny ahy tsy maintsy mametraka tsy misy mpamily ACPI aho na tsy mametraka ary raha vao apetraka dia tsy maintsy mandeha any amin'ny Configuration Bootloader ao YaST2 ary manova ny sainam-pirenena avy amin'ny ACPI = mankany ACPI = On, raha tsy izany , Tsy maty aho.
Misaotra petercheco amin'ny lahatsoratra, tena ilaina. Hiresaka azy aho rehefa manavao ny OpenSuse 13.2.
Nandresy ahy i SuSe tamin'ny 7.3. OS-ko isan'andro izao, tena afa-po.
Misaotra betsaka ary faly aho: D.
Na iza na iza mahay mametraka Dropbox ao amin'ny openuse 13.2 ary manana olana aho satria nametraka virtualbox aho fa rehefa mihazakazaka aho dia tsy manao na inona na inona
zypper ao anaty dropbox nautilus-dropbox
Tonga amin'ny repo izy :).
Raha ny VirtualBox dia tsy maintsy apetrakao ity fonosana ity:
zypper amin'ny virtualbox-qt
Avy eo dia sokafanao ny Yast ary mankany amin'ny mpitantana ny mpampiasa ianao -> manova -> antsipirihany ary eo ankavanana dia mahita vondrona ianao. Anisan'izany ny antsoina hoe vboxusers. Tsy maintsy halefa. Avereno indray ary mandehana.
Jarl dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, tiako ny OpenSuse fa tsy afaka misaraka amin'ny kanelina intsony aho, afaka misy miteny amiko ve ny fomba hametrahana fametrahana madio amin'ity birao ity ao amin'ny oSUSE 13.2? Misaotra betsaka.
Valiny tamin'i Jarl
Ity no hitako:
Misaotra, efa nandinika ilay torolàlana aho. 😉
Manaova fametrahana faran'izay kely amin'ny X ary avy eo ampiasao ity toro-lalana ity:
zypper ar http://download.opensuse.org/repositories/X11:/Cinnamon:/Factory/openSUSE_13.2 kanelina
zypper ref Kanelina
zypper ao anaty lamina kanelina
Misaotra tamin'ny fampahalalana, hiandry andro vitsivitsy aho ary hiezaka ny hanao azy. 😉
freakz dia hoy izy:
Te-hanao fangatahana aho.
hatramin'ny nanampiako ny nvidia 750ti dia tsy afaka mihazakazaka distro aho.
tsy misy vita ny boot.
Mamaly an'i freakz
Avelino De Sousa dia hoy izy:
Salama, ao amin'ny OpenSUSE 13.2, napetraka toy ny ao amin'ny Ubuntu ve ireo "extra extra" voafetra?
Valiny tamin'i Avelino De Sousa
Tsy misy "mametraka ubuntu-restrished-extra" toy izany, raha tsy ampidirinao ny repository Packman sy ny libdvdcss ary apetraho avy eo ireo fonosana mifandraika amin'izany, miaraka amin'ny 13.1 no narahako ity torolàlana ity:
Ity ambany ity ny fizarana manazava ny fomba fanaovana azy.
Andao hojerentsika raha efa nanampy an'io tamin'ny lahatsoratro i pacman :). Tsy maintsy mamaky ...
Miala tsiny, hitako ilay avy amin'ny 13.2:
Distro tsara !!! Vao nametraka azy tao amin'ny PC aho tamin'ny voalohany !!! Haingam-pandeha sy mafy orina izy io. Tsy ho hitako ny fomba fametrahana ny lohahevitra GTK sy ny lohahevitra kisary mba hahatonga azy io ho tsara kokoa. Misaotra avy any Arzantina! Mario.
Ampidiro ity fonosana ity:
zypper amin'ny gnome-tweak-tool
linuxero211 dia hoy izy:
Salama PeterCheco, manana fanontaniana aho. Azonao atao ve ny milaza amiko hoe aiza no ahafahako misintona an'ity rindrambaiko ampiasainao amin'ny kalitao tsara ity? Tiako be (raha izao aho tsy mampiasa openSUSE fa LMDE). Misaotra anao ary miarahaba anao avy any Košice aho. 😉
Valio ny linuxero211
Misaotra namana… Neny ary inona no ataonao any Slovakia?
Salama, misaotra tamin'ny sary an-tsaina! 🙂
Manao izay azoko atao aho eto. Miaina, mianatra ary miasa koa aho. 😀
Madreeee… :). Fa kosa ianao Hispanika na Slovak izay nianatra teny espaniola tamin'ny reny mampihomehy? Raha ny Czechs sy ny Slovakia no miempo iray: D. Ary ny C koa ...
Avy any Venezoelà aho. Ale viem aj slovenský psať, hovoriť. 😛
Mba miangavy re! azonao atao ve ny milaza amiko ny fomba fanamboarana usb bootable amin'ny openuse 13.2 avy any Ubuntu? Nanandrana tamin'ny multisystem aho ary tsy ekeny… Niezaka tamin'ny Unetbootin aho ary na ………. ahoana no hataoko?
ps: Nanamarina ny pejy openuse momba ny fomba famoronana usb azo ampiasaina aho ary tsy mety amiko izany ...
zShackra dia hoy izy:
Jereo, andramo ny baiko "dd" ...
Fafao ny fizarazaran'ireo usb misy anao amin'ny GParted na amin'ny rindrambaiko tadiavinao ... (angon-drakitra nomaniny alohan'ny mazava ho azy).
Vantany vao vita:
# dd if = »path / to / opensuse.iso» an'ny = / dev / sdX
Araka ny ho hitanao dia tsy maintsy atao ho faka izy io, ary ny lalan'ny iso dia tsy maintsy mandeha tsy misy fononteny raha tsy hoe misy habaka (azonao atao ny mampiasa backslashes eny amin'ny habakabaka), ary amin'ny lalana mankany amin'ny usb anao, ovao ny X ho ara-bakiteny. fa ny rafitra nomeko anao amin'ny usb anao (azonao atao ny manamarina azy amin'ny sudo fdisk -l), mitandrema, tsy tokony hamaritra fizarazarana ianao, izany hoe SDX fotsiny no avelanao, fa tsy sdX1 na sdX2… sns.
Miandry ny famaranana azy ianao (ny fahatarana dia hitovy amin'ny haben'ny ISO sy ny hafainganan'ny fanoratana amin'ny usb ...)
Tokony ho afaka boot ianao avy any ...
Mamaly an'i zShackra
Salama, apetraho ny Imagewriter. Io no fomba tsara indrindra hanaovana USB Bootable. sudo apt-mahazo mametraka usb-imagewriter.
dd raha = la_iso_opensuse.iso an'ny = / dev / sdb (na litera hafa izay mifanentana amin'ny usb anao).
Tsy fantatro ny antony tsy ahafahako mampiasa ny mpanontaire Epson Stylus Photo R265 hiasa amin'ity distro ity, eny fa na dia ny fisintomana ireo mpamily avy ao amin'ny pejy fisintomana an'i Epson ary mampifandray azy mandritra ny fametrahana azy. Raha ny hevitro ity karazana mpanonta ity dia tsy miasa miaraka amin'ity rafitra miasa ity.
Tsara ny tolakandro, rehefa mamaky ity lahatsoratra ity aho dia hitako fa mampiasa openuse gnome ianao ary tiako ho fantatra hoe manao ahoana ny tohana miaraka amin'ny fanohanan'ny multimedia satria na dia nametraka ireo repo packman sy codecs marobe aza aho dia manome ahy olana hatrany ny lalao totem sy ny rhythmbox. misy rakitra multimedia ary aleoko ampiasaina amin'ny safidy hafa toy ny gnome-mplayer ohatra, na dia tsy azonao atao aza, inona no hataonay?
ampidiro ity baiko ity ary apetraho ireo codecs:
zypper mametraka libxine2-codecs k3b-codecs FFmpeg mandringa gstreamer-plugins-bad gstreamer-plugins-ratsy gstreamer-plugins-ugly-Orig-addon gstreamer-plugins-libav libdvdcss2
Inona no tsy azoko raha tsy mametraka ny Packman Repositories aho?
Aorian'izany rehetra izany, fonosana notoroana 200 voalohany, avy eo fonosana 300 hamerenana ary amin'ny farany dia hita fa tsy afaka milalao .mkv .mp4 .wmv .3gp sns sns sns ary mametraka vlc! Tsy misaotra! Ho an'ny mpilalao hafa raha efa manana ny rafitra iray
Ny valinteniko teo aloha dia mamaha ny fisalasalanao.
Hanamboatra ny fanemorana ny fisokafan'ny Firefox sy Thunderbird 25 segondra ve ny ekipa OpenSuse?
Geraldo rivera dia hoy izy:
Hikaroka ao amin'ny google ny rakitra LibreOfficeTurno.sh ary hampavitrika azy, hanaisotra izany olana izany, maimaoffice, firefox, thunderbird, sns.
Valiny tamin'i Geraldo Rivera
Heveriko fa izao no tianao holazaina:
Tsy mety amiko izany amin'ny OpenSuse, amin'ny fizarana hafa rehetra ataony. Olana iray tsy nahitako valiny ho an'ny kinova OpenSuse maro izany ary mahasosotra ahy satria miaraka amin'ireo rindranasa telo no tena ampiasako (firefox, thunderbird ary libreoffice).
Na izany na tsy izany, misaotra tamin'ny fanampiana.
Mamaha ny olanao io:
Sokafy ny Yast ary mandehana amin'ireo fifandraisana amin'ny tamba-jotra. Ao anatiny ianao no mizaha ireo kiheba amin'ny DNS sy ny anaran'ny rafitra. Ao no ahitanao ny fizarana anaran'ny PC ary tsy maintsy tsindrio eo ambanin'ilay hostname antsoina hoe Set hostname to ip (loopback).
Mitsitsia dia mandehana :).
Niezaka ny hanajanona ny IPV6 tamin'ny Firefox sy Yast aho rehefa nahita ny hafatrao ary nahita ny hazavana 🙂
Misaotra betsaka, rangahy.
zotra dia hoy izy:
Mpitari-dalana tsara, ianao izay mandray anjara hatrany amin'ity fizarana mahafinaritra ity. Izaho manokana dia aleoko esorina (ary apetraka ao amin'ny TABU) ilay fonosana "PackageKit" amin'ny fotoana fametrahana azy, satria miteraka fahasosorana amiko foana izany.
Raha ny hevitro manokana, hametrahana zavatra, ny zypper (sy ny Yast2 raha te hampiasa interface interface ianao) dia ampy ary sisa. Mbola tsy azoko hoe maninona no misy ny "apper". Ny zavatra tsara momba ny rindrambaiko maimaimpoana dia ny misafidy malalaka, ka ny tsirairay no misafidy izay tiany indrindra. ^ _ ^
Mamaly amin'ny zirkô
Misaotra indrindra namana… :). Marina ny voalazanao. Afaka nivoaka i Apper. Zypper sy yast foana no ampiasaiko toa anao.
Petercheco, fantatrao ve raha 13.2 koa LTS? na ilay 13.1 izay ampiasako amin'ny birao ihany .. !!!
Na dia manana Mint kde amin'ny solosaina findainy aza aho dia nampiasa ny birao bebe kokoa tamin'ny opensuse 13.1 ary efa namaky zava-mahatalanjona 13.2 saingy tsy namporisihina aho hampidina azy. !! Toy ny hoe te-hanova ny Mint an'ny solosaina findainy amin'ny olon-kafa aho
13.1 fotsiny :). Mazava ho azy .. Ny kinova openSUSE rehetra dia misy fanohanana famoahana roa manaraka ary miampy roa volana izay azonao eo amin'ny 20 volana.
Ismogu dia hoy izy:
Hey, zavatra hafahafa no nitranga tamiko. Izaho dia nametraka ny codec multimedia rehetra, afaka nijery ny karazan-tsary rehetra tamin'ny alàlan'ny vlc aho. Avy amin'ny mp4, hatramin'ny Vob. Na izany aza, omaly 18 novambra, talata, nampiasa ny baiko aho, ho faka: "Zypper dup" ary nivadika ho izy rehetra. …. manompo ny mp3, clementine excellente. Na izany aza, ny rindrambaiko horonantsary openSUSE default, toa ny VLC. Mahazo ity lesoka manaraka ity aho:
«Tsy misy mody decoder mety:
Tsy manohana ny horonan-tsary na horonam-peo "h264" ny VLC. Mampalahelo fa tsy misy fomba fanamboarana azy.
Tsy misy mody decoder mety:
Tsy manohana endrika audio na horonantsary "mp4a" ny VLC. Mampalahelo fa tsy misy fomba fanamboarana azy. "
Aza mandehandeha,…. uu
Valiny tamin'i Ismogu
jojojo, nanao ny zava-drehetra indray aho, ny tiako holazaina dia niverina nanao izay nataoko teo aloha aho, talohan'ny nijereko ity bilaogy ity ary nataoko izay nataonao ary nandaitra tamiko izany, nataoko indray ary dia izay. ; -; : 'v mampatahotra izaitsizy izahay.
Miala tsiny amin'ny fiainako manontolo fa nanandrana nanombohana openuse bootable avy amin'ny usb izay mbola tsy vitako mihitsy, ny mpamorona usb linuxlive ho an'ny windows ary ny unetbootin ho an'ny linux dia tsy manompo ahy fotsiny amin'ny ISO openuse, misy fanazavana na fanampiana azafady? Misaotra mialoha..
Salama, ampiasao ny rufus, tsy namela ahy ihany koa ary niasa tsara ny zava-drehetra.
Rufus dia miasa, fa amin'ny usb yes ary amin'ny iray hafa dia tsy nampidiriny ny kernel nandritra ny fametrahana mialoha. indraindray miankina amin'ny pendrive koa io.
Mamaly an'i anonimmousse
Ampidiro ny Opensuse13.2 manana olana amin'ny fanandramana manokatra pdf misy faran'ny okular sy okular aho azonao lazaina amiko ve ny antony?
Nohavaozina OpenSUSE 13.2
Vao avy nanavao ny OS aho. Tamin'ny voalohany dia heveriko fa tsara, toy ny mahazatra. Ny boot dia somary miadana kokoa noho ny OpenSUSE 13.1.
Misaotra ny mpitari-dalana. Fanoroana tsara izany.
Aorian'ny fametrahana ny openuse 13.2 dia mangataka amiko foana ny usb fametrahana mba hametahana programa na hanao fanovana avy any aloha dia milaza amiko fa tsy afaka miditra amin'ny salantsalin'ny fametrahana ianao sy ny lalan'ny usb, ampidiriko izy ary ataoko ny fanovana, ahoana no fomba hamahako ity izay angatahiko foana usb fametrahana
Salama! Jereo ao amin'ny lisitry ny tahiry raha toa ka nampandeha ny iray izay manondro ny mpanelanelana amin'ny fametrahana ianao, amin'ny tranga misy anao ny USB, ary vonoy izany. Matetika io no voalohany.
Tokoa. Any Yast ianao dia mankany amin'ny toerana fitahirizam-bokatra ary ao no amonoanao ny repo manondro ny USB na DVD anao :).
Kirito dia hoy izy:
iza no anaran'ny repository ??? alefaso ny sasany ary zavatra mitovy foana no mitranga.
Mamaly an'i kirito
Ny repository dvd dia antsoina hoe openSUSE-13.2-0
Salama, nametraka suse 13.2 fotsiny aho, milamina ny zava-drehetra, tsy fantany fotsiny ireo seranan-tseraserako ary tsy afaka manindry kitay ho an'ny fifandraisana wifi aho, afaka manampy ahy ve ianao?
Apetraho ny Kernel Desktop raha manana 64 bit na 32 bit processeur miaraka amin'i PAE ianao:
Raha te hahalala raha manohana ny fihazakazahan'ny PAE ny mpikirakira anao:
saka / proc / cpuinfo
Ny safidy hafa dia ny fanovana yast2-> System -> / etc / sysconfig ary asio xhci_hcd amin'ny INITRD_MODULES sy MODULES_LOADED_ON_BOOT
Salama Peter, efa nametraka ny Desktop Kernel aho, namerina namerina ilay solosaina ary tsy nisy, tsy haiko raha mila manao zavatra hafa aho. Etsy ankilany, te hampiasa ilay safidy hafa aho ary tsy haiko ny manao azy.
Eny, efa hafahafa ity ... Tsy mbola nitranga tamiko izany. Hamarino amin'ny BIOS na UEFI fa manana ny seranan-tsambo USB azonao atao ianao raha toa ka miasa tsy misy olana.
Ny safidy nomeko anao dia ny fampiasana ny rindranasa Yast ary mankany amin'ny sokajy System sy / etc / sysconfig ianao. Ny sary rehetra, fa raha nametraka ny Desktop Kernel ianao dia tsy ilaina ho anao.
Salama Peter, voavaha ny olana. Noho ny torohevitrao dia niditra tao amin'ny BIOS aho ary tsy nanana ny seranan-tsambo USB afaka alefa, navelako izy ireo ary tonga dia fantatro izay rehetra nipaipaika ahy ary mandeha tsara.
Misaotra betsaka tamin'ny fandraisana anjara sy fanoloran-tena ho anao.
Famihinana avy any amin'ny nosy Canary. (Espana)
Tongasoa ianao namana, izany no nahatongavanay teto :).
Miarahaba anao anio avy any Prague fa rahampitso avy any Madrid (Espana).
Misaotra fa manandrana ny 13.2 amin'ny intel dual core, ram 4gb, rtl8187 aho ary amin'izao fotoana itiavako azy izao dia efa nanandrana ny Ubuntu, Fedora, Mint ... ary sambany aho nametraka ny Open Suse amin'izao fotoana izao ok daholo , olana kely fotsiny amin'ny Ny tambajotra fitantanana dia tsy maintsy nametraka iw, satria tsy nanana fifandraisana Internet aho satria tsy afaka nifandray tamin'ny Wi-Fi, nametraka azy avy tao amin'ny pendrive fametrahana aho tamin'ny alàlan'ny Yast ary voavaha ny olana, misaotra ireo fandraisana anjara.
Jose A. Lopez dia hoy izy:
Manantena aho fa ireo no kaody ilaina amin'ny birao KDE.
Valiny tamin'i Jose A. Lopez
Ho an'ny tontolo iainana rehetra ...
Cristian Rengifo dia hoy izy:
Salama, ary ilaina izany hanaovana izany amin'ny kaody? Vao avy nametraka ny OpenSuse 13.2 aho ary miseho amin'ny endrika sary hametrahana fanavaozana izany, tsy nanindry ny Install aho miandry ny valinteninao, raha ataoko amin'ny maody sary na console izany, araho.
Valiny tamin'i Cristian Rengifo
Azonao atao izany amin'ny alàlan'ny console sy amin'ny Yast, fa ny console kosa tsy dia mitaky fotoana firy: D.
Invader_zim dia hoy izy:
Mpampianatra tena tsara !! Misaotra betsaka fa nanampy be !!
Valio ny Invader_zim
Tena tsara, misaotra ny mpitari-dalana. mahafaly
Tongasoa ianao .. Faly aho 🙂
810 fonosana hanatsarana ny INSTALLATION FRESH !!!!
AIZA IZAO NO MAHITA….!
tolak'andro tsara ity kinova ity dia azo apetraka amin'ny Internet, toy ny kinova 11.0
JUAN CARLOS FERRER dia hoy izy:
Salama, manana fanontaniana aho, hita fa nametraka nyuseuse 13.2 amin'ny solosainako aho fa te handahatra asa amin'ny crontab, mba hovonoina ho azy io, efa nataoko tamin'ny ubuntu sy kinovan'ny openuse hafa fa tao Ity kinova ity dia tsy te hampandeha ahy izao fanao mahazatra izao:
Araka ny hitanao dia nomarihiko hovonoina isan'andro isan'andro tamin'ny 8:20 alina, saingy tsy nampiharina ilay sazy.
Valio amin'i JUAN CARLOS FERRER
20 20 * * * fanakatonana -h izao
20 20 * * * herinaratra
Pilgrim dia hoy izy:
Te-hametraka openuse amin'ny Windows 8 aho ... saingy manandrana mametraka azy amin'ny usb aho ary, raha ny marina dia tsy hitako izay hatao. Tonga ny teboka iray izay mangataka amiko hisafidy kapila iray izay, rehefa mamaky aho dia tokony ho ilay manana sary iso an'ny rafitra hapetraka, saingy misafidy ny usb "azo sintomina" aho, ary mbola mangataka toerana manokana amiko izy , toy ny làlana, ary tsy hitako izay hapetraka: S
Valiny amin'ny Pilgrim
Fon dia hoy izy:
Apetrako amin'ny rindrambaiko "rufus" ny USB miaraka amin'ny safidinao uefi. Raha sendra avelao fotsiny ilay kapila tianao hametrahana mifandray. Tsy nanana olana aho. Nanandrana tamin'ny fandaharana hafa aho taloha ary tsy nisy niasa ho ahy.
Valiny tamin'i Fon
Omano ny usb mivantana:
Tutorial fampidirana (13.2 na Tumbleweed dia mametraka mitovy):
Salama daholo!!! Somary vaovao amin'ny linux aho ary manana olana amin'ny feo. Manana karatra fanamafisam-peo usb aho satria may ny kara-paneniko izay nanana ny solosainako !!! Ny olana dia amin'ny PULSE satria miaraka amin'i ALSA dia mandeha tsara ny feo miaraka amin'ny roa fa ny fifandraisana mikrofona dia miasa ho ahy fotsiny amin'ny alsa ary amin'ny pulsa dia tsy mandeha izy !!! Nampiasa WIFISLAX aho ary ny feo sy ny mikrô dia miasa tsara ho ahy ary mitondra an'i Alsa ho mpamily Sound, fa amin'ireo fizarana hafa misy Pulse, tsy mandeha amiko ny mikrô !!! RAHA MISY MAHAY MOMBA NY FOMBA HANASITRAKA NY PULSE HATRANY ALSA dia misaotra anao aho. NA RAHA MAHALALA VAHAOLANA IANAO, manantena aho fa afaka manampy ahy ianao, arahabaina amin'ny rehetra !!!
Facebook ao amin'ny TOR. Misy fanazavana.